Dawladda Kenya oo qabatay dad ay la xiriirinayso Al-shabab. – Radio Daljir
Dawladda Kenya oo qabatay dad ay la xiriirinayso Al-shabab.
Nairobi,Dec,24 -Ciidanka booliska Kenya ayaa waxa ay soo qabteen 6ruux oo looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin kooxda Al-Shabab ee ka dagaalanta gudaha dalka Soomaaliya.
Mathi Tera oo ah madaxa ciidanka booliska Kenya ayaa sheegay in 6da ruux soo qabashadooda ay ka dambeysay kadib warbixino ay heleen ciidanka booliska Kenya oo xusaya in Al-shabab ay weeraro la maagan tahay inay ka fuliso Nairobi iyo Mombasa inta lagu guda jiro dabaal daba ciida Masiixiga.
2kamid ah dadka ciidanku gacanta ku hayaan ayaa waxaa laga soo qabtay magaalada Mombasa halka 4-ta kalana laga soo qabtay magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya.
Amaanka magaalooyinka waa weyn ee dalka Kenya ayaa la adkeeyay ayadoo laga cabsi qabo weeraro inay ka dhacaan mudada lagu guda jiro fasaxa ciida kirishtaanka,ayna soo maleegto kooxda Al-shabab.
Ciidanka booliska dawladda Kenya ayaa sheegay inay ku daba jiraan kooxo kale oo ayagana la aminsan yahay inay joogi karaan dalka Kenya waxaana heegan sare la galiyay ciidanka Bilayska mudada ciida Masiixiga.
Laamaha amaanka dalka Kenya ayaa horey u shaaciyay in kooxo laga soo direy degmada Bu’aale ee gobolka J/Hoose ay weeraro ka fuliyaan magaalooyinka muhiimkaa ee Kenya.